WunYan – Page 337
YBS ပေါ်က ထီးလေးနဲ့ စုံတွဲ
သူများတွေက ရုံးမမီလို့စိတ်ဓာတ်ကျပါတယ်ဆိုမှ သူတို့က တမျိုး မကြိုက်လို့လဲ မဟုတ်ဘူး ဒါဟာ လူ့သဘာဝပါပဲ အမြင်မတော်တာပါ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တို့ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတို့သာ သွားကြပါလား အခုဟာ ကားပေါ်မှာ နေပူလို့တဲ့လေ ထီလေးဆောင်းပြီး ဘာလုပ်နေကြမှန်းမသိဘူး ဒါတွေကိုလဲ CCTV ကနေ တဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ယာဉ်မောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ် ယာဉ်အကူကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောသင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါတယ် အကြံပြုသူတစ်ဦးမှ Credit to YBS (Unicode…
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဖမ်းငါးခရိုင်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းခလေးအား အမျိုးသား ၄၀ က နှစ်နဲ့ ချီဝိုင်းမုဒိန်းကျင့်နေခဲ့ကြသည့် ဖြစ်ရပ်ကို အမှုဆင် နံမည်ဖျက်တာလို့မူဆလင် ဘာသာဝင် ရွာသားတွေကလက်မခံခဲ့ကြလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ က အမှုစစ်မရဖြစ်နေပြီး တရားခံတွေကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ အစ္စလာမ် လူငယ် အဖွဲ့ က မုဒိန်းကျင့်ခံနေရသူ မိန်းခလေးကို ရွာထဲကနေ…
Taxi သမားရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို တကယ်ပဲ လေးစားမိပါတယ်
ဒီနေ့ Taxi ထွက်ဆွဲတာ.မြို့ထဲ 13 လမ်းထိပ်ကနေလေဆိပ်ကိုနိုင်ငံ ခြားသား/သူနှစ်ယောက်ကားငှါး တာလိုက်ပို့တယ် ဆိုပါတော့ဗျာ …။ သူတို့ကို ပို့ပြီးတော့ နောက်ခရီးသည်တစ်ဦး ရတော့အင်းစိန်ပေါက်တောဝနားက မုဒိတာအိမ်ရာကို လိုက်ပို့တာစီးလာတဲ့ အမျိုးသမီးကရှေ့က ဘယ်သူ စီးသွားလဲတဲ့.’ဘာဖြစ်လို့လဲ အစ်မ’ ဒီအနောက်မှာ အိတ်တစ်အိတ်ကျန်ခဲ့တယ်တဲ့ ကျွန်ေ တ်ာလည်းသိလိုက်တယ် ..။ နိုင်ငံခြားသားကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာ. အဲဒီအိတ်ကို ခရီးသည်အစ်မရှေ့မှာ ဘဲစစ်ကြည့်လိုက်တယ်. Canon အမျိုးအစား Camera…
သေရွာပြန် ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ ပြောကြားချက်
ဟိန္ဒူလူမျိုးတစ်ဦးရဲ့ အကူအညီကိုရယူပြီးတော့ မြို့သူကြီး ရပ်ကွက် အကြမ်းဖက်သမားများ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်စဉ်မှာ အသက်မသေဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့ ဆေးရုံကြီမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေတဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကို စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ နိရဉ္စရာ သတင်းဌာနက သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရရှိသူနှစ်ဦးစလုံးဟာ မောင်တောမြို့ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်ကြပြီးတော့ မောင်တောတောင်ပိုင်း မြင်းလွတ်မြို့မှာ အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးရဲ့…
ရခိုင်အရေးကိစ္စသတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး(ငြိမ်း)သန်းရွှေ၏ မြေးဖြစ်သူ နေရွှေသွေးအောင် ပြောပြီ
နေရွှေသွေးအောင်ခေါ် ဖိုးလပြည့်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သည်များအတွက် လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းများကို နိုင်ငံတကာသို့ပျံ့နှံ့ပေါက်ရောက်ရန်နှင့် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူများ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်စေရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး သူ၏ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့သည်။ “မနေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သည်များအတွက် ဆက်သွယ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်…အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ်တွေဘက်ကအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခြင်းလည်းခံရ၊ နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာလည်း ဘက်လိုက်လွဲမှားစွာ ရေးသားဖော်ပြခြင်းလည်းခံနေရပါတယ်။ အဆိုးထဲကအကောင်းဖြစ်စဉ်ကတော့ အစိုးရ၊တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူလူထုက တိုင်းပြည်အချုပ်အခြာအာဏာထိပါးလာမယ့်ကိစ္စမှာ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းရပ်တည်ကာ အစိုးရရဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီအရေးယူဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်မှု၊ တပ်မတော်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူမှု၊…
အမာရွတ်မျိုးစုံကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ
အရေပြားပေါ်မှာ ဒဏ်ရာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါ အမာရွတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ အပူလောင်ခြင်းကြောင်းဖြစ်စေ ၊ အခြားသော ဒဏ်ရာအနာတရများ ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါ လက်ဆောင်အဖြစ် အရေပြားပေါ်မှာ အမာရွတ် ကျန်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီလို အမာရွတ်တွေဟာ အကျည်းတန်အရုပ်ဆိုးလွန်းလို့ ဘယ်သူမှ မလိုချင်ကြပါဘူး ။ ဆေးကောင်းတွေ ရှာဝယ်ပြီး လိမ်းပေမယ့် ထင်သလောက် သက်သာပျောက်ကင်းသွားခြင်း မရှိပါဘူး ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေရှိတဲ့အခါ…
ဒီတခါပြောပြမှာကတော့ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးကြည့်လိုက်လို့ သင့်ချစ်သူ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ၁၀၀% မှန်တယ်လို့ စာရေးသူမဆိုလိုပါဘူး။ သင့်ချစ်သူရဲ့ လက်ဖ၀ါးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ချစ်သူရဲ့ လက်ဖ၀ါးက အချစ်လမ်းကြောင်းကနေ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို အနည်းငယ် မှန်းဆကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်နော်။ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့ တိုက်ဆိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးဆိုတာကို ဝေဖန်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်။ ၁။ လက်ဖ၀ါးပေါ်က အချစ်ရေးလမ်းကြောင်း အတူတူဖြစ်နေရင် သင့်ချစ်သူရဲ့လက်ဖ၀ါးဟာ အခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရင် အရမ်းကို ကံကောင်းတဲ့သူလို့…
မိဘကျေးဇူးကိုသိပြီး ကျေအောင်ပြန်ဆပ်မယ်ဆိုရင် လောကမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ( ရွှေ ငွေ စသည်ပေါ့လေ) တောင်ပုံရာပုံ ပုံပြီးပေးပေမဲ့ မိဘကျေးဇူး မကျေပါဘူးတဲ့။ သားသမီးတွေက တတ်နိုင်လို့ လောကမှာ စကြာမင်းတို့ရဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာများကို ရအောင်လုပ်ပေးတာတောင် မိဘကျေးဇူးမကျေပါဘူးတဲ့ ။ အဲဒီလောက်ထိအောင် မိကျေးဇူးဟာကြီးမားပါတယ်။ ဘယ်လိုဆပ်မှ ကျေနိုင်သလဲဆိုရင် – ( ၁ ) အသဒ္ဓေ သဒ္ဓါ သမ္ပဒါယ သမာဒပေတိ…..တဲ့။…
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မြန်မာကျောင်းသားလေးကို ထိုင်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့
မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေး မောင်ဝေဖြိုးအောင် အသက် (၁၇) နှစ်ကို ဒုလ္လဘ၀တ်ထိုင်းဘုန်းကြီးတပါးက ရက်ရက် စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ FED ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုအဖွဲ့အနေနဲ့ မနေ့က “၀တ်ဖိုင်ယ်ဒေါ့်” ဘုန်းကြီးကျောင်း ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ၀၈ ၀၅ ရက်နေ့က “ဒီဝတ်ဖိုင်ယ်ဒေါ်”့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေနေ တဲ့မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေး မောင်ဝေဖြိုးအောင် အသက် (၁၇) နှစ်ကို ဒုလ္လဘ၀တ်ထိုင်းဘုန်းကြီးတပါးက ရက်…
Previous 1 … 336 337 338 … 375 Next